Wadamada Mareykanku waxay u safri karaan fasax inta lagu jiro COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Wadamada Mareykanku waxay u safri karaan fasax inta lagu jiro COVID-19
Wararka Albania • Wararka Antigua & Barbuda • Wararka Aruba • Bahamas News Breaking • Barbados News Breaking • Belize Breaking News • Bermuda Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • Croatia News Breaking News • Wararka Dominika • Wararka Dominican Republic • Wararka Faransiiska • Wararka Dowladda • Wararka Grenada • Indho Indho Indoneesiya • Jamaica News Breaking • LGBTQ • Wararka Maldives • Wararka Jabhada Malta • Wararka Mexico • News • Waqooyiga Macedonia Warbixin Dheeraad ah • jiga • Ruwanda News • Ammaanka • Wararka Saint Lucia • Saint Vincent iyo Grenadines Breaking News • Wararka Serbia • Sint Maarten Breaking News • Wararka Sri Lanka • St. Maarten Breaking News • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Turkiga • Turks iyo Caicos Breaking News • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Iyadoo 3,844,271 Mareykan ah ay ku xanuunsanaayeen Coronavirus ka dib markii 47,5 milyan laga baaray wadarta guud ee 331 Milyan. Tirada aan la ogaan ee COVID-19 ee jiran ayaa laga yaabaa inay aad uga sarreyso Mareykanka. In ka badan 5 bilood markii uu cudurka ku dhacay 1,915,175 Americans weli waxaa loo arkaa kiisas firfircoon. 142,877 Mareykan ah ayaa dhimatay. Tani waxay u dhigantaa qiyaastii 650 diyaaradood oo si buuxda u rakiban.
Xaaladda ayaa u muuqata mid faraha ka baxday, gaar ahaan Florida, Texas, Arizona, iyo California xilligan.
Warshadaha safarka iyo dalxiiska ayaa ah mid kamid ah wax soosaarka ugu daran, Mareykankuna waxay aad ujecelyihiin inay bilaabaan safarka markale Dunida si kastaba ha noqotee waxay u xirtay muwaadiniinta Mareykanka. Xitaa Midowga Yurub iyo Boqortooyada Midowday (UK) uma ogolaanayaan dadka reer Mareykan fasaxyada.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waddamo xitaa aad ugu baahan dalxiiska oo furay xuduudihii mar kale. Qaar ka mid ah dalalkan waxay soo saareen nidaamyo aad u casriyeysan si loo hubiyo in fayrasku uusan u badnayn inuu halkaas ku horumariyo Jamaica oo dhistay marinnada dalxiiska ee gaarka ah, Bahamas waxay u baahan tahay tijaabooyin. Sharciyo gaar ah looma hayo Tansaaniya. Waxaa jira sharciyo badan oo kala duwan oo loogu talagalay dalal kala duwan.
Waa kuwan liistada wadamada iyo dhulalka shisheeye ee soo dhaweynaya booqdayaasha Mareykanka xilligan:
Albania - Luulyo 1
Antigua iyo Barbuda - Juun 4
Aruba - Luulyo 10
Bahamas - Luulyo 1
Barbados - Luulyo 12
Bali (Indonesia) Sebtember 1
Belize - Ogast 15
Bermuda - Luulyo 1
Croatia - Luulyo 1
Dominica - Ogast 7
Jamhuuriyadda Dominican - Julaay 1
Dubai (UAE) - Luulyo 7
French Polynesia - Luulyo 15
Grenada - Ogast 1
Jamaica - Juun 15
Maldives - Luulyo 15
Malta - Julaay 11 (inta aan laga oggolaan oggolaanshaha)
Mexico - Juun 8
Waqooyiga Makedoniya - Luulyo 1
Rwanda - Juun 17
Serbia - Maajo 22
Sri Lanka - Ogosto 15
St. Barths - Juun 22
St. Lucia - Juun 4
St. Maarten - Ogosto 1
St. Vincent iyo Grenadines - Luulyo 1
Tanzania - Juun 1
Turkiga - Juun 12
Turkiga iyo Caicos - Luulyo 22